နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် မူဝါဒရပ်တည်မှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ ကူညီခြင်း
၂၀၂၀ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ဆန္ဒမဲပေးကြမည့်သူများသည် သူတို့၏ ရွေးချယ်စရာများကို စူစမ်းကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် မူဝါဒအရဖြေရှင်းရမည့် အရာများအပေါ်တွင် ကြောင်းကျိုးဆီလျော်သည့် ရပ်တည်ချက်များကို တင်ပြသင့်ပြီး၊ ထိုရပ်တည်ချက်များဖြင့် အနိုင်မဲများကို အာရုံစိုက်နိုင်ပါမည်။ မဲပေးသူ ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ၎င်းတို့အတွက် အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်များအပေါ်တွင် ရပ်တည်မှုနှင့် မူဝါဒအပေါ်အခြေခံပြီး မည်သူ့ကိုမဲပေးရမည်ကို သိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Following up on online advocacy training for civic society organizations, implemented by Democracy Reporting International – DRI under the EU-funded STEP Democracy programme, we hadachance to interview participants to understand how they acquired new knowledge from the training and how they will use their knowledge in their academic and professional work.
STEP Democracy: Supporting election observers in Myanmar
With the Covid-19 global pandemic, election stakeholders across the world face the dilemma to decide whether to hold the elections at the cost of public health or to postpone the elections at the cost of people’s right to participate. Good practice examples exist however, such as the Republic of Korea, which held its National Assembly elections in mid-April 2020, and Sri Lanka, which plans to hold parliamentary elections in August 2020.
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်း
ကမ္ဘာတဝန်းမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် သက်ဆိုင် ပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ပြည်သူလူထုအားလုံးအတွက် အရေးပါတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ရွေ့ဆိုင်းမည်လား သို့မဟုတ် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်မည့် ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမည်လားဆိုသည်ကို အကျပ်ရိုက်စဉ်းစားနေကြရသည့် အချိန်ကာလဖြစ်သည်။
STEP Democracy facilitates dialogue between Ayeyawady Election Sub-Commissions and Political Parties
The General Elections are now confirmed to take place on time this year. Political parties are now keener to get the latest updates on election regulations and procedures to prepare themselves well to contest in the upcoming 2020 General Elections.
တက်ကြွနိုင်ငံသားကောင်းတစ်ဦးဆိုသည်မှာ အခြားလူများ၏တန်ဖိုးများ၊ လိုအင်များကို လေးစားတန်ဖိုးထား တတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအဖွဲအစည်း၏ အကျိုးကို သယ်ပိုးကြသူများဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ထိရောက်စွာပါဝင်မှုဆိုရာတွင် နိုင်ငံသားများ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် သာယာစိုပြည်ရေးအတွက် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
အနိုင်ရသူ အကုန်ယူ စနစ် First Past The Post (FPTP)
FPTP စနစ်သည် ဗဟု/အများစု ကိုယ်စားပြုစနစ်၏ အရိုးရှင်းဆုံး ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးတည်း ရွေးချယ်သည့် မဲဆန္ဒနယ်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ဗဟိုပြု မဲရွေးချယ်သည့်စနစ်တွင် အသုံးပြုသည်။ ဆန္ဒမဲ ရွေးချယ်မည့် မဲဆန္ဒရှင်အား ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အမည်များ ဖော်ပြပေးထာပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ဦးတည်းကိုသာ ရွေး ချယ်ရသည်။
ဒီမိုကရေစီသည် လူအများက၎င်းတို့နေထိုင်လိုသည့် လူ့အသိုက်အဝန်းကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သော အစိုးရစနစ်တရပ် ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီသည် ဂရိဘာသာစကား "ပြည်သူများ" ဟုဆိုလိုသည့် "ဒီမို" နှင့် "အုပ်ချုပ်မှု"ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် "ကရာတို" တို့မှဆင်းသက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီဟူသည် "ပြည်သူများ၏အုပ်ချုပ်မှု" ဟု အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်၍ ရပါသည်။